Nhau - Chii chinonzi kusefa kwekeke kana kusefa kwebhiriji kwemachira esefa mune yekusefa press?
Chii chinonzi kusefa kwekeke kana kusefa kwebhiriji kwemachira esefa mune sefa yekutsikisa?
Sezvatinoziva, pakusarudza akakodzera sefa machira, isu tinofanirwa kubatanidza iyo mhinduro data pamwe chete nemachira esefa.
Kana iyo density yejira resefa yakakwira zvakanyanya, izvo zvinogona kukonzera kubuda kushoma uye kukanganisa kugona kwesefa yekutsikisa, izvo zvinogona kutungamira kuti usakwanise kuwana keke resefa nehumwe hunyoro hwemukati pane imwe nguva, vamwe vanototadza kuwana. keke uye nguva dzose kuva slurry mamiriro.
Kana iyo density yejira resefa yakadzikira, izvo zvinogona kukonzera dambudziko rekudonha hongu.
Nepo patinosarudza jira rakakodzera resefa, asi sei senguva dzose iyo filtrate ichiri yakasviba pakutanga patakatsiva jira idzva resefa?Uye chiitiko ichi chakawanda chiri kuitika kunyanya kune mamwe akatsetseka particles mhinduro kurapwa.
Izvo nekuti padanho rekutanga, iyo sefa zvinhu chete inokwanisa kuunganidza zvimedu nehukuru hwakakura kupfuura saizi yavo yakavhurika, saka zvidimbu zvidiki zvichapfuura uye iyo filtrate yakasviba, inoda kudzoka kumashure kwekudyisa kutenderera.
Asi kana zvimedu zvakawanda zvaunganidzwa, pachave paine keke layer pakati pemhinduro nyowani yakadyiswa uye jira resefa rinogona kubatsira kusefa, chiitiko ichi chatakadaidza kuti bridge filtration kana keke filtration.Mushure menguva pfupi, iyo filtrate ichachenesa, nguva dzose inogona kuwana yakakodzera sefa keke sezvakakumbirwa.
Chero rumwe ruzivo rwunodiwa kune mafirita mhinduro, zvisinei nesefa machira kana kusefa mashini, ingo sununguka kubata Zonel Filtech!